Nọmba ndị China sitere na 1 ruo 100 na ịkpọpụta ha - UniProyecta
Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na Mandarin Chinese ga -abụ otu n'ime asụsụ ndị kacha mkpa n'ime afọ iri na -abịanụ n'ihi nnukwu akụ na ụba China. Nke a na -ekwu, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụ asụsụ ahụ, ị ​​nwere ike bido site na nọmba na chinese, ebe ịmụta ịgụ ihe bụ otu n'ime ụzọ kacha mma isi malite n'asụsụ.
Ọ bụrụ na ị na -aga ileta obodo a, enwere okwu ụfọdụ nke ị ga -emerịrị nke ọma tupu ị bịarute ka ị nwee ike mee ka ị ghọta onwe gị, opekata mpe ihe ndị kacha mkpa.
Dị ka ọ dị n'asụsụ niile, ka ịmụta nọmba na chinese ihe mbụ ị ga -amụta bụ nọmba bụ isi, ya bụ, mụta site na 0 ruo 9, ebe ọnụọgụ ndị ọzọ mejupụtara ndị a.
Na -esote, m ga -ekerịta tebụl nke ị ga -ahụ ọnụọgụ ahụ, agwa China na ntụgharị ya n'asụsụ Spanish, ka ị nwee ike nweta echiche gbasara ịkpọpụta ọnụọgụgụ. Kedu ụzọ ọ bụla, ịnwere ike iji onye ntụgharị okwu n'ịntanetị ka ịmụta ka esi akpọpụta okwu ka ọ ka mma.
1 Nọmba ndị China sitere na 1 ruo 10
2 Ọnụ Ọgụgụ 10 ruo 20
3 Ọtụtụ narị, puku na nde na Chinese
Nọmba ndị China sitere na 1 ruo 10
Nọmba Chino pinyin
0 / 〇 na -adị
2 Abụọ ihe
3 ato senti
4 anọ sị
5 Nri wǔ
6 isii dị
7 Asaa Kedu
8 Asatọ ba
9 iteghete hee
10 iri shii
Anyị na -akwado ka ị nọrọ oge ụfọdụ ibute ọnụọgụgụ na ịme mkpọpụta okwu ha. Ozugbo ị mụtara ha nke ọma, ị nwere ike gafere na tebụl a:
Ọnụ Ọgụgụ 10 ruo 20
11 iri na otu shī ya
12 iri na abụọ ihe gi
13 Iri na atọ nkea
14 Iri na anọ shi ya
15 Iri na ise shie na
16 Iri na isii nke ọma
17 Iri na asaa shi kw
18 Iri na asatọ mee ya
19 Iri na itoolu shie hee
20 iri abụọ ihe shí
Dịka ị na -ahụ na tebụl abụọ ahụ, ihe a na -eme site na 11 ruo 19 bụ itinye nkeji iri sochiri ya. Dịka ọmụmaatụ, ịsị mmadụ iri na abụọ (shí ér) bido na shí (10) ér (2).
Nke a bụ iwu ejiri ọtụtụ ọnụọgụ na Chinese eme ihe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịsị 22, naanị ihe ị ga -eme bụ ịsị "abụọ, iri, abụọ" n'asụsụ Chinese. Ọ dị mfe ọ bụghị ya?
Ọtụtụ narị, puku na nde na Chinese
100 Mmmmmmmmmm ya bu
200 narị abụọ ọ dị
300 Mmmmmmmmmmmm nke ahụ
1 000 otu puku ọ dị mma
2 000 Mmmmmmmmmm ọ dị mma
10 000 Puku iri yọrọ
1000 000 百万 yī bǎi wàn
100 000 000 亿 yī yi
Otú ahụ ka ọ dịkwa maka ọnụ ọgụgụ buru ibu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịsị 135, naanị ị ga -asị 'otu, otu narị, atọ, iri na ise'. N'ezie, enwere ụfọdụ iwu na mwepu, mana n'ozuzu ị gaghị enwe nsogbu na ọnụọgụ China. N'okpuru, anyị akwadola vidiyo akọwapụtara nke ọma nke ị nwere ike ịghọta nke ọma ọnụọgụ ọnụọgụ yana enwere onye na -asụ asụsụ China iji nyere aka n'ịkpọpụta nọmba ndị China.
Categories Chino, Asụsụ Igodo bọtịnụ
Inicio » Asụsụ » Chino » Nọmba ndị China sitere na 1 ruo 100
7 kwuru na "nọmba China sitere na 1 ruo 100"
Ọktọba 31, 2018 na 7:21 ụtụtụ
ọ dabara m, daalụ
November 28, 2018 na 9:53 pm
Ọ masịrị m nke ukwuu .na m ekele gị
Eprel 9, 2019 na 6:25 pm
Nchịkọta dị ezigbo mma ma dị mfe icheta, zuru oke maka ndị na -amalite ịmụ ... dị ka m 🙂
June 18, 2019 na 2:18 ụtụtụ
Ọ na-atọ ụtọ
Ọgọst 31, 2019 na 1:12 pm
Kedu ka ị mere !!! Ebe mara mma, ọ na -enyere m aka nke ukwuu ịdị mma, daalụ maka ozi gị niile, debe ya, biko
Septemba 20, 2019 na 3:06 pm
Aka dị ezigbo mkpa, daalụ
Septemba 27, 2019 na 1:50 pm
Ọ ga -amasị m ịmụ ha